Tababaraha nolosha. Maxay tahay, maxaa loogu talo galay iyo astaamo noocee ah ayey leedahay | Ragga Stylish
Jarmal Portillo | | Ku habboon
Tababaraha nolosha. Xaqiiqdii waxaad si isdaba joog ah uga maqleysaa ereygaas warbaahinta iyo shabakadaha bulshada. Laakiin maxay tahay iyo meelahee ayay tilmaamaysaa? Ereyadan cusub ee Ingiriisiga ah ayaa mararka qaarkood jahwareersan Sida ay qani u tahay qaamuuska Isbaanishka, waa inaan adeegsanaa ereyo qalaad. Intaas ka sokow, Tababaraha Nolosha waxaa loo tarjumi karaa anshax cusub oo nagu soo dhoweynaya gaaritaanka himilooyinka aan isku dejinnay shaqsiyaadka iyo xirfadaha.
Qodobkaan waxaan ku sharaxeynaa waxa uu yahay tababaraha Noloshu iyo waxa loogu talagalay.
1 Waa maxay Life Life?
2 Waxqabadka iyo joogteynta
3 Tababaraha nolosha iyo ujeedooyinka
Waa maxay Life Life?
Waa karti kaa caawinaysa inaad ka fikirto si ka duwan sidii loo hagaajin lahaa isgaarsiinta aad haysato iyo qoto dheer labadaba badan naftaada si aad u gaarto yoolalka aad dejisid naftaada. Maanta qof walbaa wuxuu u dhaqaaqi karaa inuu wax gaaro. Si kastaba ha noqotee, way yar yihiin kuwa runtii leh edbinta, adkeysiga iyo adkeysiga si loo gaaro. Dejinta yool, gaar ahaan haddii ay tahay mid waqti dheer ah, waa mid adag. Hadafku waa inuu noqdaa mid macquul ah oo awood u leh inuu ku siiyo qanacsanaan kugu filan oo aad ugu dagaallanto markii aad tabar daciif ama niyadda ka liidato.
Tababaraha Life sidoo kale wuxuu khuseeyaa goobta jimicsiga. Waxaa jira shaqaale u xilsaaran dhiirigelintaada iyo kugu hagista jidkaaga si aad u gaarto yoolalkaaga. Dadka tartamaya, kuwa dhibaatada ka haysato xagga cuntada, kuwa aan lahayn awood doon laakiin u baahan isbeddel, iwm. Dhammaantood waxaa caawiya tababbarka takhasuska leh ee goobta.
Haddii ay tahay inaad ku tartanto taariikh cayiman iyo qayb gaar ah, hubaal waxaad yeelan doontaa maalmo aadan rabin xitaa inaad taabato qolka jimicsiga ama aad ka ogaato waxyaabaha ku saabsan cuntooyinka. Marka si maalmahan ay u yaryihiin oo u soo noqnoqonayaan ama loo adkeysan karo, waxaa jira tababaraha Nolosha. Waxaad dhihi kartaa waa farshaxanka lala shaqeynta dadka kale si dadkaan ay u helaan natiijada ay rabaan.
Hagaajinta waxqabadka xaaladaha ama dhibaatooyinka waa shay muhiim ah oo edbintani raacdo. Sidaa darteed, waa waxqabad abuureysa fursado ficil oo cusub oo wajahaya duruufo kala duwan una oggolaanaya natiijooyin aan caadi ahayn in la helo.
Waxqabadka iyo joogteynta
Kuwani waa laba doorsoome oo lama huraan ah marka la dejinayo yool iyo sidii loo gaari lahaa. Sidii aan horeyba u soo sheegnay, helitaanka wax aad soo jeedisay waa wax dhib badan, gaar ahaan haddii ay yihiin wax muddo dheer jira. Waxaan soo qaadaneynaa tusaale. Waxaad tahay qof cayillan oo raba inuu lumiyo boqolkiiba dufan caafimaad qaba oo beddelo qaab nololeedkaaga. Qofkani uma baahna oo keliya tilmaamaha iyo taageerada lagama maarmaanka u ah fulinta, laakiin waa inay noqotaa wax waqti dheer soconaya.
Uma dhaqmi kartid sida qof caafimaad qaba muddada uu socdo barnaamijka miisaanka oo yaraada ka dibna aad dib ugu noqoto qaab nololeedkii aad horay u lahaan jirtay. Tababaraha Nolosha waa inuu isku dayaa inuu kaa dhigo inaad wax ka beddesho caadooyinkaaga nolosha hab ah, iyaga oo ka dhigaya gudaha, ay qayb ka noqdaan iyada oo aan wax dadaal ah la gaarin. Waa wax la mid ah sida cadayga ilkahaaga cuntada ka dib. Ma ahan wax nagu adag, waxaan ku leenahay gudaha oo waa caado ka sii badan.
Tababaraha Life sidoo kale wuxuu lamid yahay isbahaysi la aasaasay inta udhaxeysa Tababaraha iyo macmiilka. Heshiiskan ay labada dhinac wada gaareen ayaa ah in la dejiyo hadaf lagana gaaro qiimo kasta. Fulinta barnaamijka la soo jeediyey, jadwalka shaqada, qiimeynta natiijooyinka, iwm. Waa shaqada tababaraha. Qofka macaamilka ah shaqadiisu waa inuu fuliyo, dareemo inuu naftiisa ku kalsoon yahay oo naftiisa ku dhiirrigeliyo mar kasta oo natiijooyin yar la arko. Tababaraha Nolosha waxaa lagu bixin karaa xiriir toos ah, emayl ama taleefan.
Kaliya maahan aalad maareynta, waa qaab loo noqdo, waxqabad iyo in lala kulmo dhibaatooyin ama ujeedooyin maalin kasta. Tani waxay sidoo kale khuseysaa heerka shirkadaha. Waa wax aad u qiimo badan tan iyo, si aad u horumariso xirfad ahaan, waxaad u baahan tahay inaad yeelato himilooyin shaqsiyeed iyo xirfad ahaanba. Himilooyinkaas ama himilooyinkani waa inay qayb ka noqdaan noloshaada oo aadan u arkin inay yihiin waajibaad balse ay u arkaan dhiirigelin.
Tababaraha nolosha iyo ujeedooyinka
Himilooyinka muddada-dheer way adag tahay in la gaaro. Sidaa darteed, Tababaruhu waa inuu ku ahaadaa dhinacaaga si uu kuu saxo, kuu taageero oo kuugu hago jidkaaga. Tababariddu waa hanaan lagu horumarin karo tababar ku filan, haddii ay tahay kiiska aad rabto inaad tababare u noqoto. Guud ahaan, si aad tababare u noqotid way fiicantahay in la ogaado haddii aad tahay qof:
Waxay leeyihiin xarun ay kula xiriiraan dadka kale wayna yaqaanaan sida loola xiriiro.
Wuxuu xiiseynayaa horumarka shaqsiyadeed iyo rabitaanka inuu ka caawiyo dadka kale inay gaaraan himilooyinkooda.
Waxaad u maleyneysaa inaad awood u leedahay inaad ku dhiirrigeliso, ku dhiirrigeliso ama ku hagto dadka kale inay beddelaan noloshooda. Kama hadlayno oo keliya inaan gaarno himilada, laakiin waxay kaa caawin doontaa inaad nolosha gebi ahaanba beddesho oo aad yeelato aragti ka duwan xilligaas.
Waxaad jeceshahay inaad caawiso dadka kale oo aad hesho qanacsanaan marka qofka aad caawiso uu gaaro himilooyinkiisa iyo horumarkiisa.
Waxaad isweydiin kartaa haddii Tababare runtii awood u leeyahay inuu noloshaada wax ka beddelo. Illaa iyo hadda, dhammaan dadka isku dayey had iyo jeer waxay kuu sheegi doonaan inay u keentay qancin shaqsi iyo guul labadaba shaqadooda iyo noloshooda shaqsiyeed. Dareen aad u weyn ayaa jira ka dib markaad gaarto himilooyinka aad adigu dejisay. Xaqiiqdii, la'aantii taageerada iyo caawinta Tababaruhu ma guuleysan lahayn.
Beddelida nolosha qof si ay horay ugu socdaan, si togan, iyo ujeedo ayaa ah waxa ugu fiican ee aad sameyn kartid si aad u beddesho. Faa'iidooyinka laga helayo isbeddelka noloshan ayaa sii muuqanaya markii aad ogaato hibooyin qarsoon oo aad awood u yeelan karto inaad si qoto dheer u dhex gasho xaaladaha. Tani waxay horseedaa wanaajinta xiriirka shaqsiyadeed, bilaabida mashaariic cusub iyo, wax walba ka sareysa, ka takhalusida waxyaabaha iyo xiriirada ku xirnaa xirnaashaha iyagoon awoodin horay u socodka.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad ku ogaan karto waxa uu yahay tababaraha Noloshu iyo waxa loogu talagalay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Tababaraha nolosha
faa'iidooyinka joojinta sigaarka
Sida loo yareeyo madax xanuunka